लगानीमा महत्वपूर्ण एक प्रश्न, ब्याज रोज्ने कि लाभांश खोज्ने ?
काठमाडौं : ‘ब्याज’ र ‘लाभांश’ लगानीकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने २ प्रमुख प्रकारका आम्दानीहरु हुन् । दुवै आम्दानीकै स्रोत भएका कारण कतिपयले यसलाई समानार्थक रुपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । तर, ब्याज र लाभांश पूर्ण रुपमा फरकफरक अवधारणाहरु हुन् । यी दुईको अर्थ, प्रकृति, दायरा, गणनाको विधि र यिनीहरुले प्रदान गर्ने अवसर जस्ता विषयमा मुख्य भिन्नता रहेको छ ।
ब्याज र लाभांशबीचको फरक कुन किसिमको लगानीबाट आम्दानी भुक्तानी हुन्छ भन्ने विषयले पनि निधारण गरेको हुन्छ । अर्थात, ब्याज कसले पाउँछ र लाभांश कसले पाउँछ भन्ने विषयमा पनि भिन्नता रहन्छ । ब्याज र लाभांशबीच धेरै भिन्नताहरु छन् । यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण भिन्नताहरुलाई चर्चा गरिएको छ :
– ब्याज भनेको ऋणीले पैसा लिए वापत तिर्ने शुल्क हो । यहाँ, ऋण लिने व्यक्ति वा संस्थाले ऋण दिने व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण लिए–दिए वापत तिर्ने शुल्क नै ब्याज हो । उदाहरणका लागि, बैंकमा भएको बचत वा मुद्दति खातामा प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीलाई लिन सकिन्छ । यहाँ तपाईंले आफ्नो पैसा बैंकलाई प्रयोग गर्न दिनु भएका कारण बैंकले तपाईंलाई ब्याज तिर्दछ ।
यसको विपरीत बैंकबाट तपाईंले ऋण लिनु भएमा बैंकलाई ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, लाभांश भनेको नाफाको हिस्साबाट वितरण गरिएको आम्दानी हो । यो चाहिँ कम्पनीमा पुँजी लगानी गरेका इक्विटी सेयरहोल्डर र अग्राधिकार सेयरहोल्डरहरुलाई आर्जित नाफाबाट वितरण गरिन्छ ।
– ब्याजलाई कसैको पैसा अरु कसैलाई प्रयोग गर्न दिँदा लाग्ने शुल्कको रुपमा लिन सकिन्छ । लाभांश भनेको कम्पनीका लगानीकर्ताहरुलाई लाभ फिर्ता दिने एक माध्यम हो ।
– ब्याजका लागि नाफाको आवश्यकता पर्दैन । नाफा कमाउने कुनै सम्भावना छैन भने पनि ब्याज चाहिँ तिर्नै पर्छ । अर्कोतर्फ, लाभांशका लागि भने कम्पनीले विभिन्न किसिमले नाफा कमाएकै हुनुपर्छ ।
– ब्याज र लाभांश कसलाई दिइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । ऋणदाताहरु तथा कम्पनीले जारी गरेका डिबेन्चर, बन्ड लगायत लगानी उपकरणमा लगानी गरेकाहरुलाई ब्याज वितरण गरिन्छ । अर्कोतर्फ, कम्पनीमा सेयर लगानी गरेका इक्विटी सेयरधनी र अग्राधिकार सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरिन्छ । ब्याज पाइने सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ बैंक, वित्तीय संस्थामा गरिएको निक्षेप त त्यसै पनि हुँदै हो ।
– ब्याज अनिवार्य तिर्नुैपर्छ । यो तिर्न इच्छा भए तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने किसिमको ऐच्छिक विषय होइन । जुनसुकै अवस्थामा पनि ब्याज तिर्नु नै पर्छ । अर्कोतर्फ, लाभांश दिने वा नदिने विषयमा भने कम्पनीले निर्णय लिन सक्छ । साथै, अवस्था हेरेर लाभांश कहिले दिने र कहिले नदिने भन्ने विषयमा पनि कम्पनीले निर्णय लिन सक्छ ।
– ब्याज पूर्वनिर्धारित हुने गर्छ । कति प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने वा दिने भनेर सुरुमै निर्धारण गरिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ, कति लाभांश पाउने वा नपाउने भन्ने विषय कम्पनी र यसको रणनीतिक योजनामा भर पर्छ । कम्पनीले कति नाफा कमाउँछ त्यसकै आधारमा लाभांश निर्धारण गरिन्छ । त्यसैले यो खासै पूर्वनिर्धारित हुँदैन । यद्दपि, अग्राधिकार सेयरधनीका लागि भने लाभांश पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ ।
त्यसो भए अब ब्याजका लागि लगानी गर्ने कि लाभांशका लागि ?
कहिलेकाहीँ कम्पनीहरुको लाभांश वितरण क्षमता उच्च हुन्छ भने कहिले घटेको हुन्छ । यस्तै, ब्याजदर पनि कहिलेकाहीँ उच्च हुन्छ भने कुनै बेला न्यून भएको हुन्छ । यी दुवै अस्थिर नै छन् । बजारको अवस्थाले लाभांश र ब्याज दुवैलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ । साथै, नीतिगत व्यवस्थाहरुले पनि दुवैलाई अस्थिर बनाउँछन् ।
कम्पनीले आज दिएको लाभांशले भविश्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तो अवस्थामा ठोकुवा गरेरै यो भन्दा यो राम्रो भन्न सकिँदैन । लगानीकर्ताले सम्पूर्ण परिस्थितिलाई विचार पुर्याएर लगानी गर्नुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा ब्याजदर फाइदाकारी बन्नसक्छ भने कतिपय अवस्थामा लाभांश लाभदायक हुन सक्छ ।
सेयर बजार फेरि किन भयो प्रभावित ?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, यस्तो छ समय तालिका
टर्कीमा कोरोना संक्रमण झन् बढ्दै, एकै दिन २० हजार संक्रमित हुँदा १८७ जनाको ज्यान गयो
नेपालमा वित्तीय संघीयता सहायता सम्बन्धी विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक
एनआइबीएल एस खुलामुखी योजनाको युनिट खरिदबिक्री अब अनलाइनबाटै
ठूला लघुवित्त कम्पनीहरुको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?